အမေရိကန်နိုင်ငံ Skyline College မှ Full Scholarship ရရှိခဲ့ပြီး High Ranking University, UCLA ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ May Myat Noe Tun မှ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံများကို ဝေမျှဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
E&C Education Consultancy မှ ဦးစီးပြုလုပ်တဲ့ "အမေရိကန်နိုင်ငံ Skyline College မှ Full Scholarship ရရှိခဲ့ပြီး High Ranking University, UCLA ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ May Myat Noe Tun မှ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံများကို ဝေမျှဆွေးနွေးပွဲ" သည် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Scholarships အများဆုံးရပြီး UCLA ကဲ့သို့ အမေရိကန် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာနဲ့ ပညာသင်ကြားလိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူ/သားများနဲ့ မိဘများ တက်ရောက်သင့်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်ရှိ Skyline College မှ Full Scholarship ရရှိပြီး လက်ရှိ အမေရိကန် ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော UCLA တွင် တက်ရောက်ခွင့်ရရှိထားတဲ့
Full Scholarship လျှောက်တဲ့အတွေ့အကြုံ
UCLA မှာ ကျောင်းလျှောက်ထားခြင်း နှင့် နေထိုင် ပညာသင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံ တွေကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
“4နှစ်ဆက်တိုက် Scholarship ကို ဘယ်လိုလျှောက်ထားရယူရမလဲ" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို *Phone Myat Aung*မှ ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Phone Myat Aung သည် US $ 88,000 နဲ့ University of the Pacific မှာ Computer Science ဘာသာရပ်နဲ့ ပညာသင်ကြား နေပြီး First Year အောင်မြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ University of the Pacific ရဲ့ (4) Years Scholarship ကို ဂုဏ်ယူဖွယ် ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။
* Scholarship မလျှောက်ခင် ဘာတွေပြင်ဆင်ခဲ့လဲ ?
* အမေရိကန်မှာကျောင်းတက်ရင်း ဘာတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲ ?
* ပညာသင်ဆုများများရအောင် ဘယ်လိုလျှောက်ခဲ့လဲ ?
* အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ နဲ့ ဝင်ငွေအပြင် သူတို့ ကြုံတွေ့ ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို အမေရိကန်မှာ ကျောင်းသွားတက်မယ့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ မိဘများ သိရှိစေရန် အခမဲ့ ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ အမေရိကန်မှာ မှာကျောင်းသွားတက်မယ့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ တွေ အတွက် ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်နဲ့ အတူ Professional Counsellor တွေလည်း ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို အခမဲ့ လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
**Online Registration ပြုလုပ်လိုပါက( http://bit.ly/2O0iSBi )မှာ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
Read More>>>> တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့နှင့် မွေးမြူရေးပညာဘွဲ့ သင်တန်းနှစ်ခု ဖွင့်လှစ်မည်
လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားတဲ့ အတွက် Registration ပြုလုပ်လိုသူများအနေနဲ့ ဖုန်း 09254389319, 0930176565 မှာ Register လုပ်နိုင်ပါတယ်။
** နေ့ရက် - 3rd August 2019
**အချိန် - 2:00 pm to 4:00 pm
**နေရာ - E&C Education Consultancy, No(22), Ground Floor, Moe Myint San Condo, Ma Kyee Kyee Street, Sanchung Township, Yangon
Source: E & C Education Consultancy
For those who want to teach overseas education seminar
More in this category: « Kao Yuan University Scholarships	Otemae တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်သို့၂၀၂၀ ခုနှစ် (၄) လပိုင်း ပညာတော်သင်သွားလိုသူများအတွက် »
ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေးမြို့မှာ နိုင်ငံတကာ ပညာရေးပြပွဲ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ပညာသင်ဆုများလည်း လျှောက်ထားနိုင်